Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle eQuartier Punta Ballena - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle eQuartier Punta Ballena
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguSebastián
I-Quartier villa complex ekhethekileyo ikwindawo entle kakhulu eUruguay, ngasemva kwePunta Ballena apho ulwandle lubonakala kakuhle, ulwandle kunye neenduli.
Yindawo yamaphupha neyohlukileyo, unokonwabela ukutshona kwelanga okungafaniyo kwindawo ethe cwaka nendalo. Yindawo entle ethe zava, ubunewunewu nendalo.
Ngaphakathi kule ndawo ungonwabela amachibi okuqubha, i-jacuzzi, i-spa, ijimu, ukhuseleko lweeyure eziyi-24, ivenkile yokutyela kunye neenkonzo zemihla ngemihla.
Iflethi ikwi-Villa 2 kule ndawo, eyona iphezulu kwaye iyindawo entle. Ukuba kumgangatho osezantsi, unokonwabela igadi entle ebonisa ulwandle olungapheliyo, eyenza indawo ekhethekileyo. Le ndawo inenkonzo yezothutho yangaphakathi, onokuyisebenzisa izihlandlo ezininzi kangangoko ufuna uze ufike uze uye kwindlu yeeklabhu.
Iflethi inamagumbi okulala amabini, amagumbi okuhlambela amabini, ikhitshi, igumbi lokuhlala/lokutyela, i-terrace, igaraji yayo kunye NEWIFI.
Ithala linendawo yokoja esetyenziswa ngokukhethekileyo, itafile enkulu negumbi lokuhlala elidityanisiweyo. Sinezinto zokugrilla ezipheleleyo ukuze ungabi nayo nantoni na xa ugrilla! Ngokungangabazekiyo le ndawo yeyona ivuyisayo kule flethi okanye kwindlu ekwicomplex, ungachitha iiyure ujonga imeko kunye nendalo.
Ikhitshi linento yonke. Izinto zasekhitshini, i-crockery epheleleyo yabantu abayi-6, ikhitshi kunye neoveni, i-toaster, i-blender, i-juiceicer, umphandle wombane kunye nomatshini wokwenza ikofu ukuze ungcamle ikofu ngokokuthanda kwakho.
Igumbi lokuhlala linomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, isofa ekwayibhedi, izitulo ezimbini, itafile yokutyela netafile yekofu kunye neSmart TV. Ukuba kuyimfuneko, kunokwenzeka ukongeza umatrasi.
Igumbi lokulala linamagumbi aliqela kwaye liqaqambile, linomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kunye neSmart TV. Ukubona xa uthe zava ebhedini, uza kuvuswa yenye yezona ndawo zintle eUruguay.
Iitawuli, amashiti neengubo ziqukiwe. Amagumbi okuhlambela ane-PH nesepha yangasese.
Umbuki zindwendwe ngu- Sebastián
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Punta Ballena